Madaxweyne Trump oo hanjabaad culus oo la xiriirta “aargudahso ay damacsantahay” u diray Iran – Calanka.com
Madaxweyne Trump oo hanjabaad culus oo la xiriirta “aargudahso ay damacsantahay” u diray Iran
in Dibedda — by admin —	September 15, 2020
Hadalka Trump ayaa yimid kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Iiraan ay qorsheysay dilka Safiirka Mareykanka ee Koofur Afrika, Lana Marks.
“Weerar walba oo ka yimaada Iiaran, noocuu doono ha noqdo, oo looga soo horjeedo Mareykanka waxaa looga jawaabi doonaa weerar lagu qaado Iiraan oo 1,000 jeer ka culus!” Trump ayaa shalay sidaas ku qoray bartiisa Twitter-ka.
Waxaa la sheegay in Iiraan ay qorsheyneysay inay disho Safiirka Mareykanka ee Koofur Afrika, oo muddo dheer saaxiib la ahayd Madaxweyne Trump, si ay uga aargoosato dilkii Janaraal Qasem Soleimani uu Mareykanku u geystay bishii January.
Gen Soleimani waxaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo diyaaradaha Mareykanku ka geysteen garoon ku yaalla Baghdad.
US: Booliskii ku lugta lahaa dhimashada ninkii qaawanaa ee madowga ahaa oo shaqada laga eryay
Hindiya iyo Shiinaha oo soo afjaraya xiisadda labada ciidan ee xadka lagu muransan yahay